​မြန်​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ် ​တိုး​ချဲ့​ပြီး ​ရွာ​သား​များ​ကို ​ဖိ​နှိပ်​နေ​သ​ဖြင့် ​တ​ရုတ်​နှင့်​ကိုး​ကန့်​နယ်​စပ်​တစ်​လျှောက်​တွင်း ​ရွာ​များ​တွင် ​လူ​မ​နေ​နိုင် - ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် (SHRF)
​မြန်​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ် ​တိုး​ချဲ့​ပြီး ​ရွာ​သား​များ​ကို ​ဖိ​နှိပ်​နေ​သ​ဖြင့် ​တ​ရုတ်​နှင့်​ကိုး​ကန့်​နယ်​စပ်​တစ်​လျှောက်​တွင်း ​ရွာ​များ​တွင် ​လူ​မ​နေ​နိုင်
​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး ​မ​ဏ္ဍိုုင်​မှ ​နောက်​ဆုံး​ရ ​သ​တင်း ​စာ​အ​မှတ် (၂/၂၀၁၆)
​ဧ​ပြီ​လ ၂၁ ​ရက် ၂၀၁၆ ​ခု​နှစ်
၂၀၁၆​ခု ​မတ်​လ​အ​တွင်း ​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး ​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ ​တွေ့​ဆုံ​မေး​မြန်း​ချက်​အ​ရ ​တောင်​ထူ​ထပ်​သော ​တ​ရုတ်​နှင့် ​ကိုး​ကန့်​နယ်​စပ်​တွင် ​မြန်​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​တို့ ​တိုး​ချဲ့ ​ချ​ထား​ပြီး​ရွာ​သား​များ​ကို ​ဖိ​နှိပ်​နေ​သ​ဖြင့် ​သောင်း​ချိီ​သည့် ​ဒု​က္ခ​သည်​တို့​မှာ ​နေ​ရပ်​မ​ပြန်​နိုင် ​ဖြစ်​နေ​ရ​သည်။
​မြန်​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​နှင့် ​ကိုး​ကန့်​ကြား ​ပြင်း​ထန်​စွာ ​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​သော​ကြောင့် ၂၀၁၅ ​ဖေ​ဖ​ဝါ​ရီ​လ ​တွင် ​စစ်​ဘေး ​ဒု​က္ခ​သည် ၁၀၀၀၀၀ ​ခန့်​သည် ​တ​ရုတ်​ပြည်​သို့ ​ထွက်​ပြေး​ခဲ့​ကြ​ရ​သည်၊ ​သူ​တို့​၏ ​ရွာ​အ​နီး​တွင် ​စ​ခန်း​ချ​ထား​သော ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​က ​ဖိ​နှိပ်​နေ​သ​ဖြင့် ​ဒု​က္ခ​သည် ​အ​များ​အ​ပြား​မှာ ​နေ​ရပ်​မ​ပြန်​နိုင် ​ဖြစ်​နေ​ရ​သည်။
​လွန်​ခဲ့​သည့်​နှစ်​က ​တိုက်​ပွဲ​များ​ပြင်း​ထန်​ချိန်​တွင် ​ရွာ​သား​များ​အ​သတ်​ခံ​ရ​ခြင်း၊ ​ပျောက်​ဆုံး​ခြင်း​များ ​အ​ခု​တိုင် ​စိုး​ရိမ်​ကြောက်​ရွံ့​နေ​စဲ​ဖြစ်​သည်၊ ​မြန်​မာ​စစ်​သား​များ ​မည်​သို့ ​ရွာ​သား​တို့​အ​ပေါ်​မ​တ​ရား​ဖမ်း​ဆီး​ခြင်း၊ ​နှိပ်​စက်​ခြင်း ၊ ​လိင်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ ​အ​ကြမ်း​ဖက်​ခြင်း၊ ​ပ​စ္စည်း​များ​လု​ယူ​ခြင်း ​အ​ဓ​မ္မ​ခိုင်း​စေ​ခြင်း ​စ​သည့် ​ဖိ​နှိ်ပ်​မှု​များ​ကို ​ရှင်း​ပြ​ကြ​သည်၊ ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​သည် ​နယ်​စပ်​တစ်​လျှောက်​တွင် ​မိုင်း​များ​ထောင်​ထား​သော​ကြောင့် ​အိမ်​ပြန် ​လာ​သော​ဒု​က္ခ​သည်​များ ​မိုင်း​ထိ ​ကြ​ရ​သည်။
​လောက်​ကိုင်​မြောက်​ဘက်​နှင့် ​ကုန်း​ကြမ်း​မြို့​နယ်၊ ​ရွာ ​ပေါင်း၂၀ ​ကျော်​ကို ​စွန့်​ခွါ​ခဲ့​သော ​ဒု​က္ခ​သည်​များ ​ရှမ်း​လူ့ ​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ ​စ​ကား​ပြော​ဆို​ရာ​တွင် ​သူ​တို့​ရွာ​များ​ကို ​လုံး၀ ​စွန့်​ခွါ​ခဲ့​သည်၊ ​တ​ခိျု့​ရွာ​သား ​သူ​တို့​၏ ​လယ်​ယာ​ကို ​ပြန်​ကြည့်​ရန် ​ခေ​တ္တ ​နေ​ကြ​ကြောင်း​ပြော​ပြ​သည်၊ ​လောက်​ကိုင်​တောင်​ပိုင်း​မှာ​လည်း ​ထို​သို့​ဖြစ်​သည်။ ​ဤ​သည်​မှာ ​မြန်​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​မှ ​ကိုး​ကန့်​ကိုယ်​ပိုင်​အုပ်​ချုပ်​ရေး​ဒေ​သ ​နယ်​စပ်​နှင့်​ကပ်​နေ ​သော ​အ​ရှေ့​ပိုင်း ​နယ်​မြေ​ရှိ ​လူ​များ​ကို ​ရည်​ရွက်​ချက်​ရှိ​ရှိ ​မောင်း​ထုတ် ​နေ​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။
​ယ​မန်​နှစ် ​တ​ရုတ်​အာ​ဏာ​ပိုင်​တို့​က ​ပိတ်​သိမ်း​လိုက်​သ​ဖြင့် ​တ​ရား​ဝင် ​ဒု​က္ခ​သည်​စ​ခန်း​များ ​မ​ရှိ​တော့​သ​ဖြင့် ​တ​ရုတ်​ပြည်​တွင် ​ပိတ်​မိ​နေ​ပြီး ​ဒု​က္ခ​သည် ၂၀၀၀၀ ​ကျော် ​မှာ ​ဖြစ်​သ​လို ​တဲ​များ​ဖြင့် ​တ​ရုတ်​နယ်​စပ်​တွင် ​နေ​ထိုင်​နေ​ကြ​ရ​သည်။ ​ဒေ​သ​အ​လှူ​ရှင်​များ​မှ ​ပေး​သည့် ​အ​လှူ​ငွေ​နှင့် ​အ​နီး​ရှိ​တောင်​ယာ​များ​တွင် ​အ​လုပ်​လုပ် ​ခါ​ရ​သည့် ​လုပ်​ခ​များ​ပေါ်​တွင် ​မှီ​ခို​ရပ်​တည်​နေ​ကြ​ရ​သည်။ ​အ​များ​စု​မှာ ​အ​လုပ်​ရှာ​ရန်​တ​ရုတ်​ပြည်​ထဲ​သို့ ​ပြန့်​နှံ့​ဝင် ​ရောက်​သွား​ကြ ​သည်။
​မြန်​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​မှ ​ဆက်​လက်​လုပ်​ဆောင်​နေ​သည့် ​ကိုး​ကန့်​အ​ရပ်​သား​များ​အ​ပေါ် ​ဖိ​နှိပ်​မှု​များ​နှင့် ​ဒု​က္ခ​သည် ​အ​ရေး​ကို ​မြန်​မာ​ပြည်​တွင်း​သာ​မ​က​ပြည်​ပ​နိုင်​ငံ​တ​ကာ​မှ ​မေ့​လျှော့​သွား​မည်​ကို ​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး ​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ ​စိုး​ရိမ်​ပူ​ပန်​မိ​သည်။ ၂၀၁၆​ခု ​ဇန်​နာ​ဝါ​ရီ​လ​တွင် ​ထုတ်​ပြန်​သည့် UNOCHA ​မှတ်​တမ်း​တွင် ​ဤ​ပြ​ဿ​နာ​၏ ​လေး​နက်​မှု​ကို ​ဖေါ့​၍ ​ဖေါ်​ပြ​ထား​ပြီး ​တ​ရုတ်​ပြည်​တွင်​နေ​ထိုင်​သည့် ​ကိုး​ကန့် ​လူ​ဦး​ရေ ၄၀၀၀​သာ​ကျန် ​တော့​သည်​ဟု​ဆို​သည်။
​ကိုး​ကန့်​နှင့် ​တ​ရုတ်​နယ်​စပ်​တွင် ​ခို​လှုံ​နေ​ရ​သော ​ဒု​က္ခ​သည် ​တို့ ​အ​တွက် ​အ​ရေး​တ​ကြီး​လို​အပ်​နေ​သော ​လူ​သား​ချင်း​စာ​နာ​မှု ​အ​ကူ​အ​ညီ​နှင့် ​ကာ​ကွယ်​စောင့်​ရှောက်​မှု​တို့​ကို ​အ​လှူ​ရှင်​များ​နှင့် ​အ​ကူ​အ​ညီ​ပေး​သည့် ​အ​ဖွဲ့​တို့ ​က ​နည်း​လမ်း​ရှာ​၍ ​ကူ​ညီ​ပေး​ရန် ​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး ​မ​ဏ္ဍိုုင်​မှ ​တိုက်​တွန်း​ပါ​သည်။
​မြန်​မာ​ပြည်​တွင် ​အ​သစ်​တက်​လာ​သည့် NLD ​အ​စိုး​ရ​အ​နေ​နှင့် ​ကိုး​ကန့် ​ဒေ​သ ​ပ​ဋိ​ပ​က္ခ​ကို​စစ်​ရေး​အ​ရ​မ​ဟုတ်​ဘဲ ​နိုင်​ငံ​ရေး​အ​ရ ​ဖြေ​ရှာ​ရန်၊ ​ကိုး​ကန့် ​မ​ပါ​ဝင်​သည့် ​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး ​လုပ်​ငန်း​စဉ်​မ​ဟုတ်​ဘဲ ​အား​လုံး​ပါ​ဝင်​သည့် ​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး ​လုပ်​ငန်း​စဉ် ​အ​သစ်​ကို ​ဖေါ်​ဆောင်​ရန် ​လည်း​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး ​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ ​တိုက်​တွန်း​ပါ​သည်။
၁ ။​ရှောင် ​ဘန်​တန်​ရွာ​မှ ​ဒု​က္ခ​သည် ( ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​၏ ​နှိပ်​စက်​ခြင်း​ခံ​ရ​သူ) ​လယ်​သ​မား ​အ​သက် ၄၉ ​နှစ်
​အ​စ​က ​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ​မှာ ​အိမ်​ခြေ ၁၅၁ ​အိမ်​ရှိ​တယ်။​အ​ခု​တော့ ​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​နေ​ရဲ​တော့​ဘူး၊ ​ဒီ​ဒု​က္ခ ​သည်​စ​ခန်း​မှာ ​နေ​နေ​တာ​က ​အိမ်​ထောင်​စု ၁၁ ​စု​ဘဲ​ရှိ​တယ်။​ဒီ​မှာ ​လူ၄၀ ​လောက်​ရှိ​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​တော်​တို့ ​အ​နီး​နား​က(​တ​ရုတ်​ပြည်​ထဲ) ​ကြံ​စိုက်​ခင်း​တွေ​မှာ ​အ​လုပ်​လုပ်​ကြ​ရ​တယ်။
​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ​နား​မှာ​မြန်​မာ.​တပ်​စ​ခန်း​ရှိ​တယ်။ ​ရွာ​အ​ပေါ်​ရဲ. ​တောင်​ကုန်း​ပေါ်​မှာ၊ ​ခ​မ​ရ ​တပ်​ရင်း၃၃ ​စစ်​သား ​တွေ ​ဒီ​စ​ခန်း​ကို ​စွဲ​တာ ​လေး​လ​လောက်​က။
​မ​နှစ် (​ဖေ​ဖ​ဝါ​ရီ​လ) ​မှာ​တိုက်​ပွဲ​တွေ​ဖြစ်​တော့ ​ရွာ​သား​အ​များ​စု​က ​တ​ရုတ်​ပြည်​ဘက်​ကို​ပြေး​ကြ​တယ်၊ ​ကျွန်​တော်​တို.​ရွာ​က ​နယ်​စပ်​နဲ့ ​သိပ်​ကပ်​နေ​တော့ ​တ​ချို့​က ​ပြန်​ကူး​ကြ​တယ်။ ​မ​နှစ်​က ​ဒီ​ဇင်​ဘာ​လ ၂၇ ​ရက်​နေ့ ​ရွာ​သား​လေး​ယောက်​နဲ့ ​အ​တူ ​ကျွန်​တော်​ပြန်​တယ်။
​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ​ကို ​ပြန်​ဖို. ​ည​နေ ၄ ​နာ​ရီ​မှာ ​ကူး​တာ ၊ ​ကျွန်​တော့်​အိမ်​မှာ ​တစ်​ည​အိပ်​တယ်။​နောက်​နေ့ ​နေ့​လည်​မှာ ​မြန်​မာ​စစ်​သား ​အ​ယောက် ၆၀ ​လောက်​ရောက်​လာ​တယ်၊ ​သူ​တို့ ​ကျွန်​တော်.​အိမ်​နား​က ​ကျည်​ဆံ​ခွံ ​တွေ ​တွေ့​တယ်​လို့ ​ဆို​ပြီး​ပြ​တယ်၊ ​သူ​တို့​ကျွန်​တော့်​ကို​ဖမ်း​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​နဲ့ ​ပြန်​လာ​တဲ့ ​ရွာ​သား​နှစ်​ယောက်​ကို ​လည်း​ဖမ်း​တယ်။လက်​ကို​ကြိုး​နဲ့ ​တုပ်​တယ်၊ ​မျက်​နှာ​ကို ​အ​ဝတ်​နဲ့ ​စည်း​တယ်၊ ​ကား​ပေါ်​တင်​ပြီး ​တာ​ရွှေ​ထန်​ရွာ​က ​စစ်​စ​ခန်း​ကို ​မောင်း​သွား​တယ်။
​အ​ခန်း​တ​ခု​ထဲ​မှာ ​ထည့်​ထား​တယ်။ ​သံ​ခြေ​ချင်း​ခတ်​ထား​တယ်၊ ​နေ ့​တိုင်း ​စစ်​သား​နှစ်​ယောက်​က ​လာ​စစ်​တယ်။ ​ကိုး​ကန့်​စစ်​သား​တွေ​နဲ့ ​တွေ့​သ​လား၊ ​ခင်​ဗျား ​သူ​တို့ ​အ​ဖွဲ့​သား​လား၊ ​စစ်​သား​တွေ​ဘယ်​မှာ​လဲ၊ ​မေး​တိုင်း ​ဘာ​မှ ​မ​သိ​ဘူး​လို့​ကျွန်​တော်​ဖြေ​တယ်၊ ​မေး​တိုင်း​ရိုက်​တယ်၊​တ​ခါ​တ​ခါ ​လက်​သီး​နဲ့​လည်း​ထိုး​တယ်၊​တ​ခါ​တ​လေ ​သေ​နတ်​ဒင်​နဲ့ ​ရိုက်​တယ်၊ ​နှာ​ခေါင်း​ရဲ. ​သွေး​တွေ​ယို​လာ​တယ်၊ ​တ​ခါ​တ​လေ ​သ​တိ​မေ့​သွား​တယ်။
​ကျွန်​တော် ​ကို်​နှစ်​ပတ်​ထား​တယ်၊ ​နောက်​တော့ ​ရွေ​ဘ ​ရွာ​မှာ ​ကျွန်​တော့်​ကို ​လွှတ်​တယ်။ ​နယ်​စပ်​ကို​ပြန်​ခဲ့​တယ်၊ ​အား​သိပ်​နည်း​နေ​လို့ ​သုံး​နာ​ရီ​လောက်​လျှောက်​ရ​တယ်။
​ကျန်​နှစ်​ယောက်​ကို​တော့ ​နောက်​ရက်​အ​နည်း​ငယ်​မှာ​လွှတ်​တယ်၊ ​သူ​တို့​လည်း​ကျွန်​တော့်​လို​ဘဲ ​အ​စစ်​ခံ ​အ​ရိုက်​ခံ​ရ​တယ်။ ​သူ​တို့​ကို​တော့ ​မျက်​နှာ​နဲ့ ​ကိုယ်​တွေ​ကို ​ဒါး​နဲ့ ​လှီး​တယ်။
​လွတ်​လာ​ပြီး ​တ​ပတ်​မှာ ​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ​က ​အ​သက် ၃၉ ​နှစ်​ရှိ​တဲ့ ​လို​ဖါ​ကျူ ​မြန်​မာ​စစ်​သား​တွေ​ရဲ့ ​အ​ဖမ်း​ခံ​ရ ​တယ်။​သူ​က​သူ့​လယ်​ကွင်း​ကို ​ပြန်​ကြည့်​တော့ ​အ​ဖမ်း​ခံ​ရ​တာ၊ ​ဆယ်​ရက် ​အ​ဖမ်း​ခံ​ရ​တယ်။​သူ ​တ​ရုတ်​ပြည် ​ဘက်​ပြန်​ရောက်​တော့ ​သူ့​မျက်​နှာ​မှာ ​ဒဏ်​ရာ​တွေ၊ ​စိတ်​တွေ​လည်း​ဂ​ယောင်​ခြောက်​ခြား​နဲ့၊ ​သူ​သုံး​ရက်​ဘဲ​နေ ​တယ် ​နောက်​တော့​ပျောက်​သွား​တယ်။
​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ​နဲ့​နီး​နီး​နေ​ချင်​လို့ ​နယ်​စပ်​မှာ​နေ​နေ​တာ​ပါ ။​တောင်​ယာ​တွေ​ကို ​ပြန်​ကြည့်​ချင်​လို့။ ​အ​ဓိ​က​ဝင်​ငွေ​က ​ကြံ​စိုက်​ပျိုး​ရေး​လေ။ ​အိမ်​ထောင်​တစ်​စု​က ​တစ်​နှစ်​မှာ ​ကြံ​ရောင်း​ရ​ငွေ ​ယွမ် ၅၀၀၀ ​လောက်​ရ​တယ်၊ ​တ​ချို့​ဆို​ယွမ်၂၀၀၀၀ ​လောက်​အ​ထိ​ရ​တယ်၊ ​အ​ခု​တော့ ​နှစ်​နှစ်​ရှိ​ပြီ ​ကြံ​မ​သိမ်း​နိုင်​ဘူး၊ ​ကျန်​တဲ့ ​ကျွဲ​နွား​တွေ​ရောင်း​ပြီး ​တ​ရုတ်​ပြည်​ထဲ​မှာ ​အ​သက်​ဆက် ​နေ​ရ​တာ၊ ​အ​ခု​တော့ ​ဘာ​မှ ​မ​ကျန်​တော့​ဘူး။
၂ ။ ​ဟောင်​ရှီ​ထို​ရွာ​သား ​အ​သက် ၅၈ ​နှစ် ​နဲ့ ​မေး​မြန်း​ခြင်း၊( ​စစ်​ပြေး​တို့ ​နေ​ရာ​ကို ​မီး​ရှို့​ခြင်း၊ ​သတ်​ဖြတ်​ခြင်း၊ ​အ​ဓ​မ္မ​ခိုင်း​စေ​ခြင်း၊ ​လု​ယက်​ခြင်း​များ​ကို ​မြန်​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​ကျူး​လွန်​ပုံ)
​ဟောင်​ရှီ​ထို​ရွာ​မှာ ​အိမ်​ထောင်​စု ၄၀ ​ကျော်​ရှိ​ခဲ့​တယ်၊ ​အ​ခု​တော့ ​အ​များ​စု​က ​ဒု​က္ခ​သည်​စ​ခန်း​မှာ​နေ​တယ်။၂၀၁၅ ​အောက်​တို​ဘာ​လ​တည်း​က ​ရောက်​နေ​တာ၊​အ​ရင်​က ​ချ​ဟီ​ဘ ​ဆို​တဲ့ ​ဒု​က္ခ​သည်​စ​ခန်း​မှာ​နေ​တယ်။ ​မြန်​မာ​ပြည် ​နယ်​စပ်​အ​ထဲ​မှာ ​နေ​တာ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ရာ​ချီ​ရှိ​တယ်။ ​အောက်​တို​ဘာ၁၅ ​ရက်​နေ့​ကျ​တော့ ​မြန်​မာ​စစ်​သား ၃၀ ​လောက်​လာ​ပြီး ​ထွက်​သွား​ဖို့ ​အ​မိန့်​ပေး​တယ်၊ ​သူ​တို့ ​လေ​ထဲ​ကို ​သေ​နတ်​ဖေါက်​ပြီး ​ခြောက်​တယ်။ ​မ​နှင်​ထုတ်​ဖို့ ​ကျွန်​တော်​တို့​က ​တောင်း​ပန်​တယ်၊ ​နောက်​တော့ ​သုံး​ရက်​အ​တွင်း​ပြောင်း​ဖို့​ပေး​တယ်၊ ​အဲ​ဒါ​ပြီး​တော့ ​သူ​တို့ ​ကျွန်​တော်​တို့​တဲ​တွေ​ကို ​မီး​ရှို့​တော.​တာ​ဘဲ။ ​ကျွန်​တော်​တို့​လည်း ​တ​ရုတ်​ပြည်​ထဲ​က ​ဒီ​မှာ​ရွေ့​လာ​ရ​တယ်။
၂၀၁၅ ​ဖ​ဖ​ဝေါ​ရီ​လ​မှာ ​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ​က ​ပြေး​လာ​ကြ​တယ်၊ ​မတ်​လ​မှာ ​ဟောင်​ရှီ​ထို​ရွာ​သား ​သုံ​ယောက် ​သူ​တို့ ​လယ်​ကို ​သွား​ပြန်​ကြည့်​တော့ ​မြန်​မာ​စစ်​သား​က ​သူ​တို့​ကို ​ဖမ်း​တယ်၊ ​နှစ်​ယောက်​ကို ​ဓါး​နဲ့ ​ခုတ်​သတ်​ခံ​ရ​တယ်၊ ​သူ​တို့ ​ယီ​လော​ဘို​နဲ့ ​လို​စီ​လူ ​ဖြစ်​တယ်။ ​သူ​တို့​က ​အ​သက် ၅၀ ​အ​ရွယ်​လောက်​ပေါ့၊ ​နောက်​တ​ယောက် ​ယီ​လော​အာ ​က ​အ​သက် ၃၀ ​လည်း ​ဓါး​နဲ့ ​အ​ခုတ်​ခံ​ရ​တယ်၊ ​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​သူ​မ​သေ​ဘူး၊ ​လွတ်​ပြီး​နယ်​စပ်​ကို ​ပြန်​ထွက်​ပြေး​လာ​တယ်။
၂၀၁၅ ​စက်​တင်​ဘာ​လ​မှာ ​နောက်​ရွာ​သား ​ရန်​ဂျင်​ဒ ​အ​သက် ၅၀ ​လောက်​က ​သူ့​ကျွွဲ​နွား​တွေ​ကို ​သွား​ပြန်​ကြည့်​တယ်။ ​မြန်​မာ​စစ်​သား​တွေ​က ​သေ​နတ်​နဲ့ ​ပစ်​တယ်၊ ​သူ့​ကို​မ​ထိ​ဘူး၊ ​ကျည်​ဆံ​တွေ​က ​သူ့​ခြေ​ထောက်​နား​မှာ ​လာ​ကျ​တယ်၊ ​သူ​လည်း​ကြောက်​လန့်​ပြီး ​ကျွဲ​နွား​တွေ​ကို ​ပစ်​ထား​ခဲ့​ပြီး ​နယ်​စပ်​ပြန်​ပြေး​လာ​ခဲ့​ရ ​တယ်၊ ​အ​ခု​သူ​စ​ခန်း​ထဲ​မှာ​ရှိ​တယ်၊ ​စိတ်​တွေ ​လုံး၀​က​တိမ်း​က​ပါး ​ဖြစ်​နေ​တယ်။
​အ​ခု​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ (​ဟောင်​ရှီ​ထို) ​ပတ်​လည်​မှာ ​မြန်​မာ​စစ်​တပ် ​စ​ခန်း ​သုံး​နေ​ရာ​တပ်​စွဲ​ထား​တယ်၊ ​စစ်​သား၁၅၀ ​လောက်​နေ​တယ်။​ရွာ​ထဲ​မှာ ​လူ​နည်း​နည်း​ဘဲ ​ရှိ​တော့​တယ်၊ ​တ​ခါ​တ​လေ ​လယ်​သွား​လုပ်​တဲ့​သူ​ဘဲ ​ရှိ​တယ်။
အပြီးစွန့်ခွာခဲ့ရသည့် ကိုးကန့် (ရှောင်လုချန်) ရွာ၏ လူသူကင်းမဲ့နေပုံ
​ရွာ​ထဲ​မှာ​နေ​ရင် ​မြန်​မာ​စစ်​သား​က ​အ​လုပ်​ခိုင်း​တယ်၊ ​ဒီ​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ​မှာ​လည်း ​လွန်​ခဲ့​တဲ့ ​လ​က ​လာ​ခိုင်း​သေး​တယ်၊ ​သူ​တို့​စ​ခန်း​အ​တွက် ​လူ​တ​ယောက် ​ဝါး​တ​လုံး​ယူ​လာ​ရ​မယ်​လို့ ​အ​မိန့်​ပေး​တယ်။ ​သူ​တို့​စ​ခန်း ​ပတ်​ဝန်း​ကျင်​ကို ​တံ​မျက်​စည်း​လှဲ​ခိုင်း​တယ်၊ ​လမ်း​ပြင်​ခိုင်း​တယ်။​သူ​တို့​လု​ယူ​လာ​တဲ့ ​ပ​စ္စည်း​တွေ​ကို​လည်း ​စ​ခန်း ​သယ်​ဖို့ ​ရွာ​သား​တွေ​ကို​ခိုင်း​တယ်၊ ​ရွေ​ဘ ​ရွာ​အိမ်​ပျက်​တွေ​ဆီ​က ​တိုင်​တွေ၊ ​ထား​ရံ​တွေ​ကို​လည်း ​သယ်​ခိုင်း ​တယ်။ ​အ​ခု​တော့​ရွေ​ဘ​ရွာ​မှာ ​လူ​မ​နေ​ကြ​တော့​ဘူး။ ​အ​ရင်​က ​အိမ်​ခြေ ၈၀ ​ကျော်​ရှိ​တယ်၊ ​အ​ခု​တော့ ​လုံး၀ ​ရွာ​ပျက်​ကြီး။ ​မြန်​မာ​စစ်​သား​တွေ​က ​အ​ကုန်​ယူ​တာ။
​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ​လည်း ​ဒီ​လို​ဘဲ၊ ​မြန်​မာ​စစ်​သား​တွေ ​အ​ကုန်​ယူ​တယ်၊ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​အ​စာ​တွေ၊ ​ပ​စ္စည်း​တွေ၊ ​စက်​တွေ၊ ​တိ​ရိ​စ္ဆာန်​တွေ။ ​ကျွန်​တော့ ​အိပ်​ယာ​တောင်​သူ​တို့​ယူ​တယ်။
၃ ။ ​ရွှင်​ဒိီ​ယို​အိုင် ​ရွာ​မှ ​ဒု​က္ခ​သည် ​လယ်​သ​မား ​အ​သက် ၆၁ ​နှစ် ( ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​ထောင်​သည့်​မိုင်း​ကြောင့် ​ထိ​ခိုက်​ခြင်း၊ ​ရွာ​သား​များ​ပျောက် ​ဆုံး​ခြင်း။)
​ဒီ​စ​ခန်း​ကို ​လွန်​ခဲ့​တဲ့ ​တ​နှစ်​က ​ရွှေ့​လာ​ခဲ့​တယ်၊ ​အ​ရင်​တုန်း​က ​လူ ၇၀၀ ​ကျော်​လောက်​နေ​တယ်၊ ၂၀၁၅ ​ခု​ဧ​ပြီ​မှာ ​ဒီ( ​နမ်​တိန်​မန်း ​တောင်​ပေါ်)​တိုက်​ပွဲ ​အ​ပြင်း​အ​ထန်​ဖြစ်​တော့ ​လက်​နက်​ကြီး​ကျည်​တွေ ​စ​ခန်း​နား​လာ​ကျ​တယ်၊ ​ကျွန်​တော်​တို့​အား​လုံး ​ရွှေ့​လာ​ရ​တော့​တယ်၊ ​နောက် ​သုံး​လ​လောက်​ကြာ​တော့ ​ပြန်​လာ​ခဲ့​တယ် ၊​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​စ​ခန်း​မှာ ​အ​ခု ​လူ​သိပ်​မ​ရှိ​တော့​ဘူး။ ​မိ​သား​စု ၁၃ ​စု​လောက်​သာ​ရှိ​တော့​တယ်၊ ​အ​ထူး​သ​ဖြင့် ​သက်​ကြီး​ရွယ်​အို​တွေ၊ ​ခ​လေး​တွေ၊ ​မ​သန်​စွမ်း​သူ​တွေ​ဘဲ။ ​တတ်​နိုင်​တဲ့ ​သူ​တွေ​က ​တ​ခြား​ကို ​ပြောင်း​သွား​ကြ​ပြီ၊ ​ကျွန်​တော်​တို့​က ​ဘယ်​မှ ​မ​ပြောင်း​နိုင်​ကြ​ဘူး၊ ​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ​ဟောင်း​နဲ့ ​နီး​တဲ့ ​ဒီ​မှာ​ဘဲ​နေ​ချင်​တယ်။ ​ဒီ​က​နေ​ဆို ​တစ်​နာ​ရီ​ဘဲ ​လျှောက်​ရ​တယ်။
​အ​ခု​ဆို​ဘယ်​သူ​မှ ​ရွာ​ကို ​မ​ပြန်​ကြ​တော့​ဘူး၊ ​ကျွန်​တော်​တို့​ရွာ ​သွား​တဲ့​လမ်း​ကို ​မြန်​မာ​စစ်​တပ်​က ​ပိတ်​ထား​တယ်၊ ​သူ​တို့​က ​ရွာ​သား​တွေ ​နယ်​စပ်​ဖြတ်​ကျော်​မ​လာ​နိုင်​အောင် ​မျုဉ်း​တွေ ​ထောင်​ထား​တယ်၊ ​မ​နှစ်​ဒီ​ဇင်​ဘာ​က ​အ​သက် ၁၅ ​နှစ်​ရှိ ​ဒု​က္ခ​သည်​ယောက်ျား​လေး​တ​ယောက် ​သူ့​နွား​ကျောင်း​ဖို့​သွား​တာ ​နယ်​စပ်​မှာ ​မိုင်း​နင်း​မိ​ခဲ့​တယ်။ ​နေ​ရာ​က ​ဒီ​က​နေ ​ဆယ်​မိ​နှစ်​လောက်​ဘဲ​ဝေး​တယ်။ ​သူ့​သူ​ငယ်​ချင်း​က ​ဒီ​စ​ခန်း​ကို ​ပြေး​လာ​ပြီး​ပြော​တော့ ​ကျွန်​တော်​နဲ့ ​တ​ခြား​လူ ​လေး​ယောက် ​သွား​ကူ​တယ်၊ ​သူ့​ကို​နမ့်​ဆမ်​ဆေး​ရုံ​ကို​ပို့ ​လိုက်​တယ်၊​သူ​ခြေ​ထောက်​ဖြတ်​လိုက်​ရ​တယ်။ ​သူ​က ​ဟောင်​ရှီ​ထို ​ရွာ​က​နေ ​တ​ရုတ်​ပြည်​ဘက်​က ​နယ်​စပ် ​စစ်​ဘေး​ရှောင်​စ​ခန်း​မှာ ​နေ​နေ​တာ။
​ကျွန်​တော်​ရွာ​ကို ​ပြန်​မ​ရောက်​တာ ​တ​နှစ်​လောက်​ရှိ​ပြီ ၊ ​ပြီး​ခဲ့​တဲ့ ​မတ်​လ​က ​ဟို​မှာ​နေ​တဲ့ ​လူ​တွေ ​ပျောက် ​ပျောက်​သွား​လို့ ​မ​ပြန်​ရဲ​ဘူး၊ ​အ​သက် ၉၀ ​လောက်​ရှိ​တဲ့ ​အ​ဖွါး​အို​နဲ့ ​သူ​မြေး​လေး ​အ​သက် ၂၀ ​လောက်​ရှိ​တဲ့ ​ဝမ်​လော်​လီ​ယူ ​ဆို​တာ​ဟို​မှာ​ရှိ​တယ်။ ​သူ​တို့​က ​သူ​တို့​အိမ်​ကို​စောင့်​နေ​တာ ​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​သူ​တို့ ​ပျောက်​သွား​တယ်။ ​ဘာ​ဖြစ်​တယ်​ဆို​တာ ​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​သိ​ကြ​ဘူး၊ ​သူ​တို့ ​အ​သတ်​ခံ​ရ​တယ်​လို့ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ထင်​တယ်။ ​လွန်​ခဲ့​တဲ့​နှစ် ​မတ်​လ​မှာ​ဘဲ ​ရွှင်​ဒိီ​ယို​အိုင် ​ရွာ​ကို ​ပြန်​သွား​တဲ့ ​ရွာ​သား ​သုံး​ယောက် ​လည်း ​ပျောက်​သွား​တယ်။ ​အ​သက် ၃၀ ​လောက်​ရှိ ​ပင်း​အန်၊ ​အ​သက် ၆၀ ​လောက်​ရှိ ​ချီ ​လော်​ဆန် ​နဲ့ ​အ​သက် ၂၅ ​လောက်​ရှိ ​ဝမ်​မ ​လီ​ယူ ​ပေါ့၊ ​သူ​တို့​က ​သူ​တို့​အိမ်​ကို ​ပြန်​ကြည့်​ကြ​တာ၊ ​ပြန်​မ​လာ​ကြ​တော့​ဘူး။
​ကျွန်​တော့်​အိမ်​ရှိ​သေး​လား ​မ​ပြော​တတ်​တော့​ဘူး၊ ​အိမ်​ထဲ ​ဘာ​တွေ​ကျန်​ဦး​မ​လဲ​လည်း ​မ​သိ​တော့​ဘူး။ ​အ​နီး​နား​မှာ ​တပ်​စ​ခန်း​ရှိ​တယ် ​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​ပြန်​ရဲ​တော့​ဘူး။
စစ်ဘေးရှောင်နေသည့် ကိုးကန့် အများစုမှာ ခလေးနဲ့ အမျိုးသမီးသက်ကြီးရွယ်အိုများ
​ဒီ​မှာ ​အ​ရေး​အ​ကြီး​ဆုံး​ပြ​ဿ​နာ​က ​ရိ​က္ခါ​ဘဲ၊ ​အ​ရင်​က ​ဆန်​လှူ​တာ​ရ​ဘူး​တယ်၊ ​အ​ခု​နှစ်​လ​ရှိ​ပြီ ​ဘာ​မှ ​မ​ရ​တော့​ဘူး၊ ​ထ​မင်း​စား ​နိုင်​အောင် ​အ​လုပ်​တော့ ​ကြိုး​စား​ရှာ​ရ​တယ်၊​စ​ခန်း​မှာ​က ​ခ​လေး​တွေ၊ ​သက်​ကြီး​ရွယ်​အို​တွေ ​များ​တော့ ​အ​လုပ်​မ ​လုပ်​နိုင်​ကြ​ဘူး၊ ​အ​နီး​နား​က ​တောင်​တွေ​ပေါ်​မှာ ​စား​ဖို့​ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက် ​တွေ ​သွား​ရှာ​ကြ​ရ​တယ်။
၄ ။ ​ဝါ​ကျစ်​ဆိုက််​မှ ​ဒု​က္ခ​သည် ​တွေ ( ​လိင်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ ​အ​ကြမ်း​ဖက်​မှု ​နှင့် ​ပြည့်​စုံ​သော ​ကိုး​ကန့် ​နိုင်​ငံ​သား​မှတ်​ပုံ​တင် ​မ​ရှိ​ခြင်း)
​အ​သက် ၄၀ ​ခန့် ​လယ်​သူ​မ
​အ​ရင်​က ​ကျွန်​မ​တို.​ရွာ​မှာ ​အိမ်​ခြေ ၆၀ ​ကျော်​ရှိ​ခဲ့​တယ်၊ ​အ​ခု​တော့ ​ရွာ​ထဲ​မှာ ​လူ​နည်း​နည်း​ဘဲ ​ကျန်​တော့​တယ်၊ ​မ​နှစ်​က ​ပြန်​တဲ့ ​အ​မျိုး​သ​မီး​တ​ချို့ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​ခံ​ရ​ပြီး​က​ထည်း​က ​ယောက်ျား​တွေ​ဘဲ​နေ​တာ၊ ​အ​မျိုး​သ​မီး​တွေ​က ​ဟို​မှာ​မ​နေ​ရဲ​တော့​ဘူး။
​ကျွန်​မ​တို့​ရွာ ( ​ဝါ​ကျစ်​ဆိုက််)​က ​ဒု​က္ခ​သည် ​အ​မျိုး​သ​မီး ​နှစ်​ယောက် ​မ​နှစ်​က ​မေ​လ​မှာ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​ခံ​ရ​တယ်။ ​တ​ယောက်​က ​အ​သက်၄၀ ​လောက်၊ ​ရွာ​က​နေ​ပြေး​လာ​ပြီး​ပြီ၊ ​သူ​က ​သူ့​အိမ်​ကို ​တိတ်​တိ်တ်​ခိုး​ပြန်​တာ၊ ​သူ့​ယောက်ျား​နဲ့ ​ပြန်​တာ​ဘဲ၊ ​သူ​ယောက်ျား​က ​လယ်​ထဲ​သွား​တော့ ​သူ.​အိမ်​ကို ​တ​ယောက်​ထည်း ​ပြန်​တာ။ ​မြန်​မာ​စစ်​စ​ခန်း​က ​အ​ပေါ်​မှာ​ရှိ​တော့ ​သူ့​ကို ​မြင်​တယ်၊ ​စစ်​သား ၄ – ၅ ​ယောက် ​ဆင်း​လာ​ပြီး ​မ​ဒိမ်း​ကျင့်​တယ်။ ​နောက် ၁၀ ​ရက်​လောက်​အ​ကြာ​မှာ ​အ​သက် ၅၀ ​လောက်​ရှိ​တဲ့ ​အ​မျိုး​သ​မီး​တ​ဦး​လည်း ​အဲ​လို​ဖြစ်​တယ်။ ​သူ​က ​သူ့​ခ​လေး​တွေ​ကို ​တ​ရုတ်​ပြည်​မှာ ​ထား​တယ်၊ ​သူ့​အိမ်​ကို ​သူ​ပြန်​ကြည့်​တာ၊ ​စစ်​သား​တွေ​က ​မြင်​တော့ ​ဆင်း​လာ​ပြီး ​သူ့​အိမ်​ထဲ​မှာ​ဘဲ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​တာ။
​အ​နီး​နား​ရှိ ​လော်​ရိန်​ကိုင်​ရွာ​က ​အ​သက် ၄၀ ​လောက်​ရှိ ​အ​မျိုး​သ​မီး​နောက်​တ​ယောက်​လည်း ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​ခံ​ရ​တယ်၊ ​မ​နှစ် ​ဩ​ဂုတ်​လ​က ။ ​သူ ​တ​ရုတ်​ပြည်​မှာ ​ခို​လှုံ​နေ​တယ်၊ ​သူ့​အိမ်​ကို ​သူ​ပြန်​ကြည့်​တယ်၊ ​သူ့​ယောက်ျား​နဲ့ ​ခ​လေး​တွေ​ကို ​နယ်​စပ်​မှာ​ထား​ခဲ့​တယ်။ ​စစ်​သား ​တစ်​အုပ်​သူ့​အိမ်​ကို​ရောက်​လာ​ပြီး ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​တယ်။ ​သူ​က ​ငို​ယို​ပြီး ​ရွာ​လူ​ကြီး​ကို ​သွား​တိုင်​တယ်။​အ​သက် ၇၃ ​နှစ်​ရှိ ​လယ်​သ​မား​ကျွန်​တော့်​မှာ ​မြန်​မာ​မှတ်​ပုံ​တင် ​ကဒ်​ပြား ​ရယ်​လို့ ​မ​ရှိ​ဘူး။ ​ရှိ​တာ​က ​သုံး​ခေါက်​ချိုး ​အ​စိမ်း​ရောင် ​မှတ်​ပုံ​တင်​ဘဲ၊​အဲ​ဒါ​ကို ၂၀၀၉ ​ခု ​မေ​လ​က ​ထုတ်​ပေး​တာ ၊ ​ကျွန်​တော်​မိ​ဘ​တွေ​မှာ​တော့ ​မှတ်​ပုံ​တင်​ရှိ​ကြ​တယ်၊ ​ကျွန်​တော်​ကို​လည်း ​ပေး​သင့်​တာ​ပေါ့၊ ​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​အာ​ဏာ​ပိုင်​တွေ​က ​ကိုး​ကန့်​လူ​မျိုး​တွေ​ကို ​မှတ်​ပုံ​တင် ​မ​လုပ်​ပေး ​ဘူး၊ ​ကျွန်​တော်​တို့​ကို ​ခွဲ​ခြား​ထား​တယ်၊ ​ဒါ​က​လည်း ​စစ်​ဖြစ်​ရ​တဲ့ ​အ​ကြောင်း​ရင်း ​တစ်​ချက်​ပေါ့။
သုံးခေါက်ချိုး မှတ်ပုံတင် ထဲ တွင်သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များ
​မှတ်​ချက် – ​အ​မျိုုး​သား ​အ​တွက် ​အ​စိမ်း​ရောင် ​သုံး​ခေါက်​ချိုး ​မှတ်​ပုံ​တင် ၊ ​အ​မျိုး​သ​မီး​အ​တွက် ​ပန်း​ရောင်​သုံး​ခေါက်​ချိုး ​မှတ်​ပုံ​တင်​ထုတ်​ပေး​တယ်။ ​ထို​မှတ်​ပုံ​တင်​တို့်​မှာ ​နိုင်​ငံ​သား​အ​ဖြစ် ​အာ​မ​ခံ​ချက်​မ​ရှိ​ကြောင်း ​ရေး​သား​ထား​သည်။ ​အ​ကန့်​သတ်​မှု​များ​နှင့် ​အ​ပြစ်​ဒဏ်​များ ​လည်း ​ဖေါ်​ပြ​ထား​သည်။
​ဥ​ပ​မာ – ​တစ်​လ​ထက်​ပို​ကြာ​သည့် ​ခ​ရီး​ကို ​သွား​လို​ပါ​က ​သက်​ဆိုင်​ရာ​သို့ ​အ​ကြောင်း​ကြား​ရ​မည်။
​သတ်​မှတ်​ထား​သော​စည်း​ကမ်း​ချက်​များ​ကို ​မ​လိုက်​နာ​ပါ​က ​ထောင်​ဒဏ်​နှစ်​နှစ်​ကျ​ခံ​နိုင်​သည် ​ဟု ​ဆို​ထား​သည်။
​အ​သေး​စိတ် ​သိ​လို​ပါ​က ​ဆက်​သွယ်​ရန်​လိပ်​စာ
​စိုင်း​ဟော်​ရှဲန် ၆၆း (၀) ၆၂ ၉၄၁ ၉၆၀၀ ( ​ရှမ်း ၊ ​အင်္ဂ​လိပ် )
​လောန့်​နွံစိန် ၆၆း (၀) ၆၃၈၃၈၉၀၂၉ ( ​ဗ​မာ ၊ ​အင်္ဂ​လိပ် )